भरतपुरको मेयरमा रेनु दाहाल विजयी, के देश अब दुर्घटनाबाट जोगिएला ?| Corporate Nepal
Wednesday, June 29, 2022 | बुधबार १५ असार, २०७९
भरतपुरको मेयरमा रेनु दाहाल विजयी, के देश अब दुर्घटनाबाट जोगिएला ?
जेठ १०, २०७९ मंगलबार १०:५०
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठवन्धनतर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल विजयी भएकी छिन् । एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई १२ हजारभन्दा बढी मतले हराउँदै रेनु भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी उनले १२ हजार ४४९ मतान्तरले एमालेका विजय सुवेदीलाई हराउन सफल भएकी छन् । प्राप्त विवरणअनुसार रेनुले ५२ हजार ३० मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका सुवेदीले ३९ हजार ५८१ मत ल्याए ।
उमपेयरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भए । अधिकारीले ५२ हजार ८०३ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमला गुरूङले ३० हजार ६१२ मत ल्याइन् । हिमलालाई एमालेको समर्थन थियो ।
मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको १४ हजार ७२८ मत आएको छ । रेनुलाई जिताउन सत्ता गठवन्धनका नेताहरुले भरतपुरमा चुनावी सभागरी आव्हान गरेका थिए । त्यस क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रेनुले हारे देश दुर्घटनामा पर्ने बताएका थिए । प्रचण्डले मतदातालाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उक्त भनाईको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ ।
तर, देशको बिग्रदो आर्थिक परिस्थिति, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा बढेको महंगी, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकट समाधान हुन नसक्ने जस्ता कुराहरुले गर्दा देश कतै दुर्घटनामा पर्ने त होइन् ? भन्ने आशंका हुन थालेको छ ।
मुलुकलाई सही बाटोमा लैजाने राम्रो भिजन भएको नेतृत्व भएन्ः मन्त्री मेटमणि चौधरी
रवि लामिछानेपछि वामदेवले पनि घोषणा गरे नयाँ पार्टी
घुस खाँदा मुलुक नबन्ने र घुस नखाँदा पैसा नहुने भएकोले अप्ठ्यारो छः मन्त्री मेटमणि चौधरी
‘टाइगर अभि जिन्दा हे’ भन्दै फुर्तीका साथ विदा भए विवादित मन्त्री आले
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि झाँक्रीका आँखाभरी आँशु
झलनाथ खनालको दबाबमा वायुसेवा निगममा गलत मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपरेको आलेको खुलासा
‘सरेण्डर’को सीमा पाँच वर्ष बनाउने तयारी, असार अन्तिमसम्मको नतिजा पर्खेका हौंः सिलवाल
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको ड्युटीमै मृत्यु
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले ३६ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने
जागिर खान नसकिने भो !
बीस लाख कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कसको कति ?
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान र कुमारीपाटीमा लञ्च गरियो अपाचे आरटीआर १६० मोटसाईकल
आज (असार १५)को राशिफलः तपाईंको पेशा, व्यवसाय, शेयर कारोबार कस्तो रहला ?
हैजा बढेपछि काठमाडौँ महानगरको एक्सनः सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन